Uchwepheshe We-Semalt Uqinisekisiwe Okudingayo Ukuvikela IWebhu YeHack of Attempts - Nakhu
Kunezinhlobo eziningi zokuhlaselwa okunonya phezu kwe-intanethi. Abantu abaningi babhekene nemisebenziabaqashi abaningi ngosuku lwabo nosuku kanye nokusebenza kwabo. Abaqaphi bachitha isikhathi esiningi sokuzama ukuzamaizindlela ezahlukene abangazisebenzisa ukwenza imisebenzi yabo. Iningi lalezi zindlela zibandakanya imisebenzi efana nokuhlaselwa kwe-DDOS noma ngisho nesayithiscripting. Konke lokhu kuhlasela kunesisusa sobugovu ngemuva kokuhlupheka okukhulu kwalabo abahlukunyezwayo.
Ngokuvamile, abaduni bangaqondisa iwebhusayithi yakho ngezizathu eziningi. Ngokuvamile, bebengabaukuntshontsha ulwazi lomsebenzisi olufana nolwazi lwekhadi lesikweletu noma ngisho ne-panel control hacks. Kwezinye izimo, i-hacker ingase ibambe inzuzoulwazi oluvela kwiwebhusayithi njengolwazi lomthengi kanye nokungena kwezinto ezibalulekile zenkampani. Abaqaphikungabangela futhi ukuncintisana okungalungile lapho umonakalo ongabangela khona iwebhusayithi yakho noma usesho lwakho lwe-Search Engine Optimization (SEO)izindlela ezehlukene. Ngenxa yalokho, kubalulekile ukuvikela uhlelo lwakho kubaduni.
uJack Miller, isazi esiholela phambili Semalt ,ichaza ngezinye zezindlela ezingakuvimbela ekuhlaseleni kwalaba bantu:
Ukuvikeleka kokungena okungagunyaziwe
Enye yezinto ezilula i-hacker engayenza kusayithi lakho uzama ukungena ngemvume njengomqondisi.Ngenxa yalokho, i-hacker ingazama ukuqagela amaphasiwedi ahlukene ukuze ubone ukuthi iyiphi yezinye zazo engase iwele ngenxa yokungazi kwakho. Ukusebenzisa amaphasiwedi aphephilekubalulekile. Amaphasiwedi afana no-12345 awaphephile futhi angaveza yonke iwebhusayithi ibe yingozi. Ngaphezu kwalokho, akufanele usebenzise iphasiwedilokho kulula kakhulu ukuqagela. Amazwi afana negama lomntanakho angaba ukuqagela ngokuphelele kumuntu onolwazi. Kunalokho, hlanganisaizinhlamvu ezahlukene ezinamafomu ahlukahlukene.
Lokhu kuyingozi ukuthi kudinga ukuphela komsebenzisi. Lokhu kuphazamiseka kuhilela ukusebenzisa ezinyeamafomu kanye namasimu ombhalo oyisebenzisayo, njengefomu lokubhalisa. I-hacker iqhubezela ikhodi yokunamathisela kwifomu lomsebenzisi equkethe iskripthi. Phezuluukushaya ukungena, iskripthi siqala ukusebenza kuseva yakho. Ngenxa yalokho, umqashi uthola ukufinyelela kuwo wonke idatha yekhasimende, kufaka phakathiukuphazamiseka komthengi kuhlasela nganoma isiphi isikhathi lapho bethengisa kuwebhusayithi yakho. Ukuze ulungise lokhu kusengozini, udinga indlela yokufaka ikhodiulwazi lwamafomu akho ngaphambi kokuwondla ku-database yakho. Ngenxa yalokho, iskriphthi ayikwazi ukugijima ku-database yakho kusukela kakadeizinyathelo ezenzelwe ukuzenza ukuthi zingasebenzi.
Kuwo wonke amabhizinisi e-commerce, ukuphepha kwe-cyber kuyisikhathazo esiyinhloko uma kufikaukuze isebenze ku-intanethi. Kukhona imizamo eminingi ye-hack nabantu abangase bafune ukuphazamisa iwebhusayithi yakho kumawebhusayithi amaningi kakhulu. Ukuphepha kwakhoindawo, kanye nenhlalakahle yamakhasimende akho, kuxhomeke kakhulu emisebenzini yakho njengomphathi.